Etu ị ga-esi mepụta GIF na LucidPix - Nduzi Dị Mfe
Ọnweghị ihe otú ị si ekwu ya, GIF ma ọ bụ GIF, anyị bụ nnukwu ndị egwu nke usoro onyonyo. Ọ bụ ihe ijuanya na onye mepụtara GIF bụ otu n'ime ngwaọrụ akachasị eji arụ ọrụ na LucidPix. Ngwa gam akporo na iPhone a na-eme ka ọ dị ngwa ma dịkwa mfe imepụta GIF animated site na foto ọ bụla ị họọrọ. Nke a bụ ntuziaka ngwa ngwa banyere otu esi agbanwe foto gị mgbe niile na-agagharị foto GIF na LucidPix.
Họrọ Image iji tọghata gaa na foto 3D na-ebugharị GIF
download ma mepee LucidPix na pịa akara ngosi igwefoto n'etiti etiti ihuenyo gị. Si ebe a, ị nwere ike ịhọrọ foto ọ bụla na ekwentị gị iji mee 3D. Ozugbo ịchọtara foto gị, pịa ịhọrọ ya, wee pịa N'ịwa 3D Photo .
Viewhụchalụ Gimim animụlụ gị
Mgbe ntụgharị 3D ngwa ngwa, foto 3D gị nke mepụtara ọhụrụ dị njikere ka ekiri. Gaa n'ihu, tịgharịa ekwentị gị ka ọ hụ gburugburu ihe ma gagharị gburugburu. Mgbe ụfọdụ ọ na - adị gị ka ị na - elele ezigbo oge na oge, ọ bụghị naanị foto efu!
Ọ bụrụ n'ihe masịrị gị, ị nwere ike mbupụ ya ozugbo dị ka GIF animated, ma ọ bụ jiri ihe nzacha ma ọ bụ ederede 3D hazie ya.
Ugbu a bụ ohere gị iji hazie 3D GIF gị na ihe nzacha foto Instagram ederede 3D ederede. Kpatụ na akara ngosi ị nwere ike ịhọrọ site n’ọtụtụ nzacha nke na-agbanwe ọdịdị nke onyonyo 3D gị. Iji tinye ederede 3D, pịa akara ngosi ederede ma pịnye nnomi gị.
Mepụta GIF gị animated
Ozugbo ị gbakwunyela nzacha na ederede ọ bụla, naanị nkeji ole na ole ka ị ghara ịmepụta GIF gị. Swipe site na ikere na ndepụta na pịa 3D GIF akara ngosi.
Choo mmeghari nke GIF gi
Mgbe ịpịchara 3D GIF, ị nwere ike ịhọrọ ụdị ọsọ ịchọrọ ka GIF gị gbanwee, dị ka ụdị animation 3D. Nanị slide mkpịsị aka gị n’akụkụ ogwe ọsọ iji bulie ma ọ bụ ibelata ọsọ ahụ, na pịa akara ngosi eserese anọ ahụ n'okpuru osisi ahụ iji nwalee nhọrọ mmegharị dị iche iche maka GIF.
Chekwaa GIF gi
Ozugbo ịhọrọ ọsọ na ije ọ bụla ịchọrọ, pịa Chekwa GIF icon ịchekwaa GIF na foto foto ekwentị gị! Site n’ebe ahụ, ịnwere ike bulite GIF na mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụla na-elekọta mmadụ niile ka ị hụ.
Ugbu a ị mụtala otu, budata LucidPix ugbu a iji mepụta GIF nke gị!
Atụmatụ Esere Ese Agbaghara Nke Etiti →← Oge kachasi mma nke akụkọ ihe mere eme Olympic na 3D